Priming ny Omnichannel amin'ny zoma mainty sy alatsinain'ny cyber | Martech Zone
Tsy misy fanontaniana momba izany, ny fivarotana antsinjarany dia miova tanteraka. Ny fikororohana tsy tapaka eo amin'ireo fantsona rehetra dia manery ireo mpivarotra hanenjana ny paikadiny amin'ny varotra sy ny varotra, indrindra rehefa manakaiky ny Black Friday sy Cyber ​​Monday.
Ny varotra niomerika, izay misy an-tserasera sy finday, dia mazava ho azy fa ireo toerana mamirapiratra amin'ny antsinjarany. Cyber ​​Monday 2016 nitaky ny anaram-boninahitra ho an'ny andro fivarotana an-tserasera lehibe indrindra amin'ny tantaran'ny Etazonia, miaraka amin'ny 3.39 miliara dolara amin'ny varotra amin'ny Internet. Ny zoma mainty dia tonga tao anatin'ny segondra tena akaiky 3.34 miliara dolara amin'ny varotra amin'ny Internet, mitondra rakitsoratra 1.2 miliara dolara amin'ny fidiram-bola amin'ny finday. Ny famantarana rehetra dia manondro fivarotana nomerika tsara kokoa mandritra ny fialantsasatra amin'ity taona ity.
Na dia miakatra aza ny varotra antsinjarany amin'ny ankapobeny, ny hafatra dia somary mifangaro amin'ny fivarotana ambongadiny. Araka ny filazan'ny mpivarotra antsinjarany Fung Global Retail sy Teknolojia, fanakatonana fivarotana maherin'ny 5,700 1 no nambara tamin'ny 2017 septambra 181. Fisondrotana 2016% izany tamin'ny XNUMX. Nefa Tatitry ny fikarohana IHL Tombanana fa ny mpivarotra dia hanokatra fivarotana miisa 4,080 bebe kokoa amin'ny taona 2017 noho ny fikatonany ary mikasa ny hisokatra maherin'ny 5,500 2018 bebe kokoa amin'ny taona XNUMX.
Ka inona no tokony hataon'ny mpivarotra rehefa manatrika ny fialantsasatra amin'ity taona ity izy ireo? Ahoana no fomba tokony hanarahan'izy ireo ny varotra sy ny varotra mba hahatratrarana ny naoty tsara rehetra? Atombohy amin'ny fanarahana sy ny famakafakana ny angon-drakitra ho an'ny mpanjifa ary avy eo amboary mifanaraka amin'izany, amin'ny fifantohana manokana amin'ny paikady omnichannel izay tsy mahafoy fantsona tsirairay na mpanjifa tsirairay. Ary miresaka momba ny mpanjifa tsirairay, manambola fotoana sy ezaka amin'ny personalization rehefa mandanjalanja tsara ny paikadim-barotra amin'ny varotra ianao.
Ny momba ny Omnichannel rehetra
Mba hamakivakiana ireo fiovana sy fifanoheran-kevitra ireo, ny mpivarotra dia manararaotra serivisy vaovao, teknolojia ary ezaky ny varotra kendrena hanan-kery amin'ny omnichannel, fomba fampiasa amin'ny fantsona maro izay manaparitaka ny elanelana misy eo amin'ny magazay, an-tserasera, finday ary koa ny katalaogna ho lasa traikefa mitambatra sy mirindra. Izany dia satria ny fivarotana omnichannel no misy ny vola. Araka ny a tatitra avy amin'ny eMarketer, 59% ny mpivarotra no nilaza fa ny mpanjifa omnichannel dia nahazo tombony betsaka tamin'ny 2016 noho ny mpanjifa tokana, vs. 48% tamin'ny 2015.
Vao tsy ela akory izay dia nanitatra ny dian-tongotr'i omnichannel i Amazon tamin'ny alàlan'ny fandefasana ny tsipika fitafiany manokana, feno miaraka Prime Wardrobe izay mamela ny mpampiasa hanandrana alohan'ny hividianany. Nahazo ny Whole Foods ihany koa izy ary nanokatra fivarotam-boky fivarotana Amazon vitsivitsy. Ankoatr'izay, ny orinasa dia mitrandraka ny toerana fitahirizam-bokatra any amin'ny tanàn-dehibe manerana ny firenena mba hahafahany manolotra fandefasana andro mitovy amin'ireo mpanjifa izay mividy amin'ny alàlan'ny fantsom-pifandraisana an-tserasera sy finday.
Nahomby tokoa ny hetsika fivarotana Amazon Prime Day an'ny mpivarotra. Tamin'ity taona ity, Amazon Prime Day dia nantsoina ho andro fivarotana lehibe indrindra an'ny orinasa, mitombo 60% manomboka amin'ny 2016 ary mihoatra ny varotra Amazon Friday 2016 sy Cyber ​​Monday. Ary Amazon dia manao asa lehibe mikendry ny entany misy marika, raha jerena ny ankamaroan'ny entana amidy tamin'ny Prime Day dia vokatra marika Amazon. Mila porofo misimisy kokoa? Araka ny fikarohana avy amin'ny Slice Intelligence, 43% ny varotra antsinjarany rehetra any Etazonia dia namakivaky an'i Amazon tamin'ny taona 2016. Miaraka amin'ireo fanitarana vokatra vaovao ireo, dia mitady hiantoka sombin-tsarimihetsika lehibe kokoa i Amazon, angamba hatramin'ny 50% ny tsena amin'ny 2021, araka ny filazan'ny orinasa Wall Street Needham.
Mandritra izany fotoana izany Walmart, miaraka amin'ny fivarotana maherin'ny 5,000, dia nanangana ny fisiany an-tserasera. Na dia somary somary ao ambadiky ny Amazon aza izany amin'ny fanitarana omnichannel, ny fividianana Jet.com an'ny mpivarotra vao haingana, miaraka amin'ny fahazoana ireo mpivarotra enta-madinika amin'ny Internet, ModCloth, Bonobos ary Moosejaw, dia nahatonga ny fitomboan'ny varotra an-tserasera. Mba hifaninanana bebe kokoa amin'ny fidiran'ny Amazon amin'ny sehatry ny fivarotana dia manolotra fanafarana enta-mavesatra an-tserasera izao i Walmart ary nanambara fotsiny fa fiaraha-miasa amin'ny Google tamin'ny voalohan'ny volana septambra mba hiditra bebe kokoa amin'ny tsenan'ny Amazon. Amin'ny Mey, Nanambara i Walmart fitomboana 63% amin'ny varotra e-varotra telovolana.
Ataovy personalize io
Ny fironana lehibe amin'ny fivarotana amin'izao fotoana izao - ary ny iray izay efa mitondra valiny marina - dia personalization. Mpivarotra marobe no efa mampiasa personalization, ary ny sasany efa an-taonany maro. Ny fikarohana dia manondro fa misy fiantraikany mahery vaika ny maha-izy azy manokana. Raha ny marina, vao haingana fianarana avy amin'ny Infosys nahita fa ny 86% n'ny mpanjifa dia nilaza fa ny #personalization dia misy akony farafaharatsiny amin'ny fanapahan-kevitry ny fividianana, ary efa ho ny iray ampahatelon'ny mpanjifa no maniry manokana kokoa amin'ny traikefa fiantsenana.
Ny serivisy sy ny fampiharana vaovao dia mampiditra traikefa manokana momba ny fiantsenana sy fividianana manokana. Misy ny Nordstrom's Trunk Club, iray amin'ireo serivisy vaovao miantehitra amin'ny maodelin'ny famandrihana ary mampiasa ny lokony amin'ny fisafidianana akanjo mifototra amin'ny safidin'ny mpanjifa, avy eo mandefasa akanjo voafantina mivantana amin'ny mpanjifa. Ny hafa dia misy an'i StitchFix, MM.LaFleur ary Fabletics. Misy ihany koa ny fampiharana toa ny The Hunt. Amin'ny alàlan'ny fandefasana sary misy zavatra tadiavinao, miaraka amin'ny fepetra takiana manokana toy ny teti-bola sy ny habeny, ireo tambajotran-tserasera Hunt hanomezana sosokevitra ny vokatra. Keep, fampiharana iray hafa, dia manome sarety fiantsenana manerana ny tranonkala antsoina hoe Keep One Cart mba hahafahan'ny mpiantsena mividy vokatra amin'ny magazay rehetra, na aiza na aiza, amin'ny traikefa amin'ny fizahana mivaingana. Ireo serivisy sy fampiharana rehetra ireo dia miresaka amin'ny hetahetan'ny mpanjifa hanana traikefa manokana momba ny fiantsenana, ary ny mpivarotra dia mila miantoka ny fanatanterahana izany faniriana izany.
Raha te hifaninana amin'ny tontolon'ny varotra ankehitriny, ny orinasa dia tsy tokony hahalala sy hahatakatra ny mpanjifany ihany fa handrefesana tsara ny fantsom-pivarotana rehetra sy ny fampielezana varotra mba hanatsarana ny varotra kendrena, ny fizarana ary ny vola miditra amin'ny farany.
Mazava ho azy fa miady amin'ny dokam-barotra ny ankamaroan'ny mpanjifa. Mitady fomba hisorohana an'io izy ireo ary hampifanaraka azy, noho izany ny mpivarotra dia tsy maintsy mampifanaraka sy mamorona mba hanomezana ny mpanjifa ny mombamomba azy ireo notadiaviny. Ny fidirana amin'ny haino aman-jery tsara indrindra androany dia manara-maso ireo teboka sy fifandraisana rehetra amin'ny mpanjifa mba hanamorana ny fifandraisana manokana eo amin'ny marika sy ny mpanjifa.
Tsy ny mpanjifa ihany no maniry ny fanandramana manokana an'ny mpanjifa, fa ny traikefa fivarotana tsy miova amin'ny digital sy brick ary mortar ihany koa no tadiaviny. Ary miaraka amin'ny traikefa tsy miova, ohatra, ny mpivarotra dia efa voaomana tsara kokoa efitrano fandraisam-bahiny sy efitrano fandraisam-bahiny.
Mba hanaterana traikefa manokana sy tsy miovaova amin'ny omnichannel dia mila mahatakatra ireo mpanjifanao kendrena ianao. Ny fomba tsara indrindra hanaovana izany dia ny famakafakana ny angon-drakitra mpanjifa. Mazava ho azy, ho an'ny mpivarotra maro, ny fanasivanana ny angon-drakitra voaangona amin'ny alàlan'ny rafitra fivarotana sy fantsom-pifandraisana an-tserasera dia mety be. Mbola sarotra kokoa aza ny fampidirana ireo angon-drakitra manerana ny fantsona samihafa ho an'ny sary feno kokoa, indrindra satria fikambanana maro no mbola miasa amin'ny fantsom-pifandraisana.
Ny fomba iray handresena ireo fanamby ireo dia ny fiaraha-miasa amin'ny mpiara-miasa izay manana fahaizana miorim-paka ao amin'ny angona sy ny analytics ary izay manana fitaovana hahafantarana ireo vaovao mitsikera sy hahatakatra tsara kokoa ny tantara izay lazain'ny angona. Torohevitra vitsivitsy vitsivitsy rehefa mifantina namana hiara-miasa aminy: tadiavo ireo orinasa mampiasa vola sy mampiasa analytics matanjaka, ary manara-maso ireo angona azo avy amin'ny loharanom-baovao marobe mba hahafahana mifandray tsara amin'ny ROI amin'ny fampielezan-kevitra.
Miaraka amin'ny varotra tarihan'ny angona sy sary feno kokoa momba ny mpanjifanao kendrena, azonao atao ny miantoka fa ny touchpoint tsirairay dia ampahany amin'ny iray cohesive ary traikefa fiantsenana omnichannel namboarina dia tonga ny Zoma Mainty sy ny Alatsinain'ny Cyber. Tsy maninona na miantsena amin'izany fanomezana fety tonga lafatra izany any amin'ny magazay ao amin'ny magazay eo an-toerana ny mpanjifa, mametaka ny katalaogno vao tonga tany amin'ny mailaka, na namakivaky ireo vokatra tamin'ny finday. Ny zava-dehibe dia ny mividy.
Tags: amazon primeblack fridaycyber mondayemarketeromnichannelpersonalizationakanjo lehibeWalmart
Jessica Hawthorne-Castro, CEO an'ny Hawthorne, dia nametraka tamin'ny toerany stratejika ilay masoivoho eo alohan'ilay revolisiona marketing vaovao momba ny dokambarotra izay ahitan'ny kanto ny siansa. Manomboka amin'ny famoronana sy famokarana ka hatrany amin'ny haino aman-jery sy analytics, dia manolo-tena amin'ny kalitao premium sy fanavaozana i Jessica manerana ny taranja maso ivoho rehetra. Ny andraikiny dia mitarika indrindra amin'ny fampiroboroboana ny fifandraisan'ny mpanjifa efa hatry ny ela mba hampiroboroboana ny doka fampielezan-kevitra stratejika sy azo refesina, natao handrehitra ny valin'ny mpanjifa eo noho eo.
Ahoana ny fomba itondran'ny mpisolovava hetsika Instagram bebe kokoa noho ny Influencers
Adobe Creative Cloud: Vakio ny printy tsara amin'ny licences!